भैरव अर्यालको भानुभक्तमाथिको झटारो- अमरावति कान्तिपुरी नगरी - A complete Nepali news portal based on news & views
- - भैरव अर्याल
सबै थरीका बीच भानुभक्त पनि एक बेग्लै थरी व्यक्तित्व थिए– नयाँ सडकमा । सबै दूतका बीच उनी आफू काव्यदूत थिए स्वर्गका । यसैले वास्ता गरिरहनुभन्दा २/४ जना कविलाई नै भेटेर बात मार्न आदिकविलाई मन लाग्यो । तर भेट्ने कहाँ चएर, कसलाई ? उनी अन्योलमा परे । तैपनि नजिकैको एक युवकलाई कोट्याउँदै उनले सोधे–‘यहाँ को–को लेखक कवि कहाँ–कहाँ छन् हँ ?’
युवकले नाक नेप्ट्याएर जवाफ दियो –‘पुराना कविलेखक अलिकति एकेडेमीतिर साहित्यमा रिसरागबारे रिसर्च गर्दै छन् भन्ने सुनेथेँ, नयाँ लेखकहरू प्रायः यतै वरपर छरिएका होलान् । तपाईं कसलाई खाज्नुहुन्छ, एउटा बिलकुलै बफाउँदो नयाँ कवि त म पनि हुँ ।’
भानुभक्तले नमस्ते गर्दै खुसी प्रकट गरे –“ओहो ! त्यसो भए त ढुङ्गो खोज्दा देउता मिलिहाल्यो नि । यहाँले कति वर्ष काव्यसाधना गर्नु भएको छ कुन्नि ?”
युवकले चारमिनारको (भारतमा बनेको सस्तो खाले चुरोट) बट्टा उचाल्दै जवाफ दियो – ‘मैले लेख्न त यसपालिदेखि थालेको हुँ, तर गोडा सातेक लामालामा कविता लेखिसकेँ । एउटा ताजा कविता सुन्नुहुन्छ भने सुनाई पनि हाँलु ?’
आदिकवि भानुभक्त कविको कविता सुन्न तरखराउँदै थिए, अर्काे ठिटो आएर भन्न थाल्यो, “तँ पनि कविता लेख्ने ? कवितै सुुन्नुहुन्छ भने सुन्नुहोस् बाजे, बिलकुलै आधुनिक–यही पीपलको बोटको कविता ।”
‘ओहो ! यहाँहरू सबै कवि हुनुहुँदो रहेछ । होइन, यहाँ अरू कवि पनि छन् ?’ ‘अरू को छन् र ? ’–भनी नयाँ कवि बताउँदै थिए, पत्रिका बेच्ने हकरले उहीँनिर आएर भन्यो– ‘एउटा कवि त म पनि छु हजुर !’ उसले भन्दाभन्दै पसलेले कुरा थप्यो –‘यहाँ मिनिष्टरदेखि कम्पोजिटर सम्म सबै कवि ।’ जेहोस् आदिकविलाई कविहरू बढेको सुन्दा खुसी नै लाग्यो ।
यस्तै खुसी–खुसीमा एकजना सज्जनले कविजीलाई नजिकैको रेष्टुराँतिर डो¥याए । उनी रेष्टुराँभित्र पस्नमात्र के लागेका थिए उनको बिर्खे टोपीमा एउटा मरेको मुसो फ्वात्त पर्न आयो । उनी जिल्ल परेर मास्तिर हेर्दै थिए । अर्काे झ्यालबाट एक थुप्रो फोहर–फाल्नको टाला पुष्पवर्षा भएझैं सडकमा बर्सिए । यो वर्षाले आफ्नो स्वागत गरेको हो कि विरोध गरेको हो, उनलाई ठम्याउन धौधौ पर्याे ।
रेष्टुराँभित्र एक छेउमा दुई चार जना भात खाँदै थिए, अर्काे छेउमा दुई चार जना जेरी जिप्टयाउँदै थिए । अलि पर एउटा अँध्यारो कुनामा दुई चार जना रम र ममः भन्दै थिए । त्यसैले यो भट्टी हो कि चियापसल हो कि भोजनशाला हो–कविले केही बुझ्दै बुझेनन् । उनको उत्सुकता शान्त गर्दै नजिकैका सज्जनले भने– ‘यस पसलका विशेषता के भने शाकाहारी, मांसाहारी, दुग्धाहारी र मद्याहारी जो जेजस्तो छ यहाँ खानेकुरा पाइन्छ । दोस्रो विशेषता यहाँ जति पुरानो खानेकुरा खोजे पनि तुरुन्त पाइन्छ ।
भानुभक्तले ठाने– ‘म पनि पुरानै मान्छे भएकोले यहाँ ल्याएको होला ।’ यस्तैमा सिँगानको लत्को दौरातिर पुछ्दै एउटा मरन्च्याँसे केटाले खानेकुराको रिकापी टक्रयायो । भानुभक्त भने कविताको धूनमा मस्त थिए –
सज्जन रहेछन् – लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीका एजेन्ट । उनलाई इन्स्योरेन्स गर्नोस् भनेर निकै बुझाउँथे तर भरखर स्वर्गबाट ओर्लेका भानुभक्तलाई कहाँको लाइफ इन्स्योरेन्स । आखिर बल्लबल्ल सज्जनको पञ्जाबाट फुत्केर भानुभक्तजी वास माग्ने तरखरमा हिँडे ।
घरैघरले बाटो नपाइने आजको कान्तिपुरमा वासकै समस्या छ भन्ने उनलाई के थाहा थियो र । एकदुई गर्दै नयाँ सडकको ढोकादेखि वसन्तपुरसम्म गोडा पन्ध्रेक घरमा उनले वास मागे –एक रातका लागि ।
तर कसैले छैन मात्र भनेर फर्काए त कसैले ‘यत्तिका होटल हुँदाहुँदै वास माग्न घर घर चाहार्ने यो लबस्तरो बूढोलाई लगाइदेओ न कुक्कुर’ भनि झपारे । कसैले उनलाई चोरको शङ्का गरे त कुनै लाल बुझक्कडले ‘यो सीआइडी हो सीआइडी ’ पनि भने ।
बाह्र बजुन्जेल खोज्दा पनि वास पाउन नसकेर भानुभक्तजी रङमङिदै थिए, बेसमयमा हिँडेको उनलाई पुलिसले पक्रिदियो । ‘स्वर्गबाट कान्तिपुर हेरुँ भनेर आएको, वास नपाएको कुरा बताएपछि पुलिसले निगाहा गरेर भन्यो– ‘यो हावा खुस्केको पहाडीया रहेछ । भैगो छाडिदिऊँ ।’
अनि ‘पेटीतिर गएर बस’ भनि पुलिस हिँड्यो । भानुभक्तजी पेटी–पेटी रानीपोखरीको डिलमा पुगेर रोकिए । रानिपोखरीको पालेले कड्केर सोध्यो, ‘क्या हो, हाम्फाल्ने सुर छ कि कसो ?’
उनले नम्रतासाथ ‘होइन’ भने र यो पनि बताए कि ‘बाँकी रात काट्ने कुनै ओत–सोत पाइन्छ कि ?’ बूढो पालेले भानुभक्तलाई पनि बूढो देखेर हो कि किन हो ‘ऊ त्यो सालिकता बस्नोस् बाजे !’ भनी भानुभक्तकै सालिक देखाइदियो ।
उनी गएर यसो हेर्छन् त आफ्नै प्रतिमुर्ति । एकछिन दङ्गदास भएर उनले आफ्नो सालिक टुलुटुलु हेरिरहे । माला लगाइदिएको सिन्दुर दलिदिएको भव्य मूर्ति, उनी एक मन दङ्ग परे । तर आफ्नो बिहानदेखिको रित्तो पेट छाम्दा र यत्रो कान्तिपुरीमा वास नपाउँदा भने उनलाई ग्लानि पनि लाग्यो । सालिकनिर टुसुक्क बसेर पछ्यौरा झिकेर ओढ्दै उनले गमे –
उनी गुनगुनाउँदै थिए, त्यहीँनेर पेटीमा एक डल्लो भई सुतेको एउटा केटो उठेर भन्न लाग्यो– ‘दाजु ! तिम्रो पछ्यौराको एउटा छेउ मलाई पनि देऊ न, साहै्र जाडो भयो ।’ भानुभक्तले उसलाई बोलाएर जम्मै पछ्यौरा ओढाइदिए ।
जीउ तातेपछि केटाले भन्यो ‘भात खाने जग्गा मासेर त्यत्रा घर बन्छन् तर गरिबको छोरालाई सधैँ पेटीका बास । आज भानुजयन्ती, राति ९ बजेसम्म सारा मान्छे यहीँ जम्मा भएर बेलामा सुत्न पाइएन । यो ‘भानुझक्तको सालिक भन्छ, यो भानुभक्त भन्ने कुनचाहिँको नाम रेछ हँ दाई ? भानुभक्तलाई पनि देखेनौ हगि ?’
(आज २०७४ असार २९ आदिकवि भानुभक्त आचार्यको २०४ औं जन्मजयन्ती । भानुजयन्तीको अवसरमा हामीले निबन्धकार भैरव अर्यालको भानुको कविता शैलीमा आधारित व्यङ्ग्य निबन्ध ‘अमरावति कान्तिपुरी नगरी’ प्रकाशन गरेका छौँ । निबन्ध अर्यालको निबन्ध संग्रह ‘जयभुँडी’बाट साभार गरिएको हो ।